Ny Tantaran’i César Manuel : Ankizy Mpifindramonina Ao La Havane · Global Voices teny Malagasy
Ny Tantaran'i César Manuel : Ankizy Mpifindramonina Ao La Havane
Nandika (fr) i Julie Desbiolles
Voadika ny 09 Aogositra 2016 5:25 GMT
César Manuel, tovolahy kiobàna mpifindramonina. Sary naverina navoaka rehefa nahazoana alàlana tamin'ny Periodismo de Barrio.
Fiarahana miasa tamin'ny gazety kiobàna anaty tambajotra, Periodismo de Barrio [fanaovana gazetim-bohitra], ity lahatsoratra ity. Ao anatin'io fifanomezan-tànana io, afaka mahafantatra ireo tantara Kiobàna tsy mitovy amin'ireo izay mivoaka any anatin'ireo mpampahalàla vaovao efa mahazatra ny mpamakinay.
Tsy mbola nitaingina fiaramanidina velively avy any Santiago de Cuba nankany La Havane i César Manuel. Na fony izy dimy taona, ary tonga nitsidika ny fianakaviany tany Indaya, faritra iray tsizarizary any amin'ny fari-piadidian'i Marianao [iray amin'ireo fari-piadidiana mandrafitra an'i La Havane], na fony izy niverina ho ao La Havane hiaraka honina tamin'ny ray aman-dreniny sy ny rahalahiny, teo amin'ny faha-11 taonany. Teraka tany Altamira izy, faritra iray “feno vato, ahitàna trano marobe”, araka ny filazan'ireo olondehibe azy. Tonga tao an-drenivohitra izy ny Janoary 2014, nandeha fiarandalamby.
Hoy aho nanontany azy :
“Tian'ise kokoa ve ny mipetraka eto La Havane noho ny any Santiago de Cuba ?
—Eny, tsara kokoa eto, hoy izy.
—Satria tsy tsara ny resaka toekarena ao Santiago. Tany Santiago, nanana boky fitànako kaonty aho, sy ny sisa, afaka nividy sakafo, fa eto tsy misy zavatra lafo, nefa any Santiago dia lafobe daholo ny zavatra rehetra… Tsia, raha ny marina dia ny mifanohitra amin'izay, hoy izy nanitsy. Lafo ny zavatra rehetra eto La Havane, saingy misy ny vola ; any Santiago, tsy misy zavatra lafo, saingy ny vola tsy misy. Any ianao, toy ny mangataka 5 pesos na 10 pesos ny mangataka 1 peso. Tsy toy izany eto.
Olona maherin'ny 518 000 teraka tany amin'ny faritany hafa no monina ao La Havane, araka ny fanisàna farany tamin'ny 2012. Amin'izy ireo, 78 505 no avy ao Santiago de Cuba, 66 361 avy any Granma, 57 221 avy any Holguín ary 51 785 avy any Guantánamo. 41% tamin'ireo mpifindramonina no mandeha mankany La Havane, ary 57% amin'ireo mpifindramonina ao anatin'ny firenena no avy any amin'ireo faritany any atsinanana [voatanisa etsy ambony]. Tamin'ny 2014 monja, ny isan'ny mpifindramonina dia + 8 977 ny mponina tao La Havane, raha – 13 023 tany amin'ireo faritany any antsinanana
Amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny taratasy momba azy, ireo fianakaviana monina any Indaya dia manana ny adiresiny avy any Guantánamo, Santiago de Cuba, ny sasany avy any Holguín ary ny sasany Camagüey. Avy amin'ireo fianakaviana avy any Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín sy Camagüey ihany koa ireo ankizy mpifindramonina miaina ao Indaya. Izy rehetra, tsy ankanavaka, dia samy nitahiry ny adiresin'ny ray aman-dreniny ao anatin'ny taratasy momba azy ireo daholo. Efa fotoana ela ny fifamatorany amin'ny faritany niavian'ny ray aman-dreniny, – na ny azy, raha toa ka tany amin'ny fahazazàny izy ireo no nifindra monina. Tsy niverina tany mihitsy ny sasany tamin'izy ireny, ny hafa indray miserana fotsiny ary tsy mahatadidy na làlana iray aza, na kianja iray, na toerana iray monja.
Ho an'ny maro amin'izy ireo, ny karapanondro natao ho an'ny tsy ampy taona, izay mivadika ho carné [karapanondro kiobàna] rehefa feno 16 taona ry zareo, dia tsy misy ifandraisany velively amin'ny tena maha-izy azy an-dry zareo. Rehefa mivadika ho carné ilay karatra any aminy, dia lasa sakana voalohany amin'ny fiainan'izy ireo arak'asa ihany koa. Amin'ny fikirizana no amahàn-dry zareo io olan'ny maha-izy azy ny tena io. Raha ny fandehany, mila fotsiny mahatsapa ny ho avy ao La Havane dia ampy. Toetsaina iray i La Havane. Fa tsy hita any anatin'ireo fepetra takian'ireo mpandray mpiasa mitazona birao fandraisana mpiasa any amin'ny fitantanan-draharaham-panjakàna io toetsaina io.
Tsy sahirana loatra mandranto ny fianarany ao La Havane ireo ankizy mpifindramonina. Toy izay koa, tsy mahita fahasarotana loatra amin'ny fanovozana fahalàlana ao La Havane ireo zatovo tonga mifindra monina. Nefa kosa, ireo tanora mpifindramonina, atorian'ny nahavitàny ny ambaratonga fototra, ny ambaratonga faharoa sy ny anejrimanontolo, dia tsy afaka raisina na aminà asa inona na asa inona raha tsy manova ny adiresiny misoratra ao anatin'ny taratasy mombamomba azy. Ireo tanora mpifindramonina ao Indaya, mifanohitra amin'ny an'ireo hafa, dia tsy misy te-ho lasa mpisolovava na injeniera. Tsy ao anatin'ny vinan'izy ireo ny anjerimanontolo. “Izay misy”, hoy ny fiteny, no raisin'ireo tanoran'i Indaya: ny fambolena.”
Hoy ny fanontaniako tamin'i César Manuel : “Inona no tian'ise hatao rehefa lehibe?”
Voalohany, ankizy mahay miresaka i César Manuel. Vao mijery azy fotsiny dia efa fantatra fa mahiratsaina izy. Tsy fantany akory fa toekarena no resahany. Resahany ihany koa ny zavatra toy ny: “Maneho ny fihetsehampony ireo ankizy ao La Havane sady manome torohevitra”. Milalao tumbadora [amponga kiobàna] izy nanomboka tamin'ny faharoa taonany, kristianina nanomboka teo amin'ny fahatelo taonany, ary toy ny mahatsiaro ny finoana fony isika mbola telo taona isika eo ampihainoana azy. Izany no antony nahaliana ahy hahalàla izay tiany hatao rehefa lehibe izy. Na dia tsy maintsy nitombo aza izy rehefa nanapaka hevitra handray fiarandalamby ho ao La Havane ny ray aman-dreniny tamin'ny Janoary 2014. Telo ambinifolo taona izy izao. Vao teo amin'ny fahatelo taona monja izy no nahazo ny carné, hoy izy mamaly :
— Mpamokatra vokatra fihinana.
*Ampahany manokana ho an'ny Global Voices ity lahatsoratra ity. Ny dika niandohana tao amin'ny “Migrants” dia azonao vakiana ato, ary ireo lahatsoratra hafa avy amin'i Elaine Díaz kosa dia ato.